Wasiirki hore Arimaha Dibadda Yuusuf Dheeg Oo Xilka Wareejiyey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Wasiirki hore Arimaha Dibadda Yuusuf Dheeg Oo Xilka Wareejiyey
Wasiirki hore Arimaha Dibadda Yuusuf Dheeg Oo Xilka Wareejiyey
December 8, 2010 - By: Abdirahman. A
Wasiirki hore ee arimaha dibada Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Yuusuf Xassan Ibraahim ”Dheeg” ayaa xilka iska wareejiyey kuna wareejiyey Wasiirka cusub ee Wasaaradaas.
Munaasabada xilwareejinta ayaa maanta ka dhacdey magaalada Muqdisho,waxaana kasoo qaybgalay masuuliyin kala duwan iyadoo xilkaas ula wareegay Wasiirka cusub ee Wasaaradaas Mudane Maxamed Cabdullaahi Oomaar.
Wasiirki hore ee arimaha dibada Yuusuf Dheeg oo ka hadlay munaasabada ayaa ku dheeraaday mudada uu xilkaas hayey waxyaabaha uu qabtay,kuwa aan u suurtagelin iyo waxyaabaha qabyada ah ee u baahan in la dhamaystiro.
Wasiirka cusub ee Wasaarada arimaha dibada ahna Raysalwasaare kuxigeen Maxamed Cabdullaahi Oomaar ayaa soo dhoweeyey sida uu xilka kusoo wareejiyey Wasiirki hore,wuxuuna ballanqaaday inuu wax badan ku talaabsan doono isagoo codsaday in lala shaqeeyo.
Yuusuf Dheeg ayaa xilka wasaaradaas soo hayey inka badan saddex bilood,waxaana uu ka qaybgalay shirar caalami ah oo badan oo ka dhacay dalka dibadiisa loogana hadlaayay arimaha Soomaaliya.